San Htun's Diary: ကျေးဇူးတော်နေ့- ၂
ကျေးဇူးတော်နေ့ နဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတဲ့ မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကျေးဇူးတော်နေ့ ဆိုပြီး ပို့ စ်လေး ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဟော...မွေးနေ့ ပြီးသွားပြန်တော့လည်း လာပြန်ပြီ ကျေးဇူးတော်နေ့၂။ ဘာတုန်းဟ ပြီးကို မပြီးနိုင်တော့ဘူး။ စီနီယာ ဦးဟန်ကြည်၊ ကိုညိမ်းနိုင်၊ မမကွန် (ခင်ဦးမေ)တို့ ကို အားကျလို့ ။ အဟက်..အဟက် မဆီမဆိုင် သူတို့ ကို ဆွဲထည့်လိုက်တယ်။
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်နဲ့ပတ်ပို့ စ်မှာ ရှိတဲ့ မွေးနေ့ နဲ့တကယ့်မွေးနေ့ က တနှစ်အတိကွာပါတယ်။ ဖြစ်ရပုံက ကလို။ ရခိုင်ပြည်နယ်က မေ့တို့ ရွာမှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ စန်းထွန်းမှာ မွေးစာရင်း မရှိပါဘူ။ "၁၃၄၄ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ...ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေတွင် မာတာမိခင်မှ မွေးဖွားသန့် စင်သည်။ အသက် ၁၂၀ ရှည်စေသော်"ဆိုတဲ့ ပေကညစ်လေးပဲ ရှိတာ။ နိုဝင်ဘာမှာ မွေးဖွားတဲ့ကလေးတွေ ကျောင်းအပ်ရင် ဒုက္ခရောက်ပါပြီ။ ကျောင်းဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ အသက်က ကိုးလိုးကန့် လန့်၎နှစ်ခွဲ အတိ။ မိဘတွေ ဦးနှောက်စားရပါပြီ။ ၄နှစ်ခွဲနဲ့ကျောင်းအပ်လို့ကလေးက တခြားကလေးတွေကို လိုက်မမှီရင် ဒုက္ခ။ နောက်တနှစ်စောင့်ပြီးမှ အပ်ရင် သူများကလေးတွေထက် နောက်ကျ။
ဒီလိုနဲ့နောင်တနှစ် စောင့်စရာမလိုဘဲ နေ့ ချင်းညချင်း တနှစ်ကြီးသွားပါတယ်။ ငါးတန်းနှစ်မှာ မှတ်ပုံတင် လုပ်ရပါတယ်။ လုပ်အားပေးတွေက ကျောင်းက ၈တန်း၊ ၉တန်း အတန်းကြီးတွေ။ သူတို့ ခမျာလည်း အတော် အုန်းစားရှာတာ။ မြန်မာသက္ကရာဇ်ကနေ အင်္ဂလိပ် သက္ကရာဇ်ကို ပြောင်းရတာ လွယ်တာမဟုတ်။ ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လိုဖြစ်တယ် မသိပါဘူး။ ၇တန်းလောက်ရောက်တော့မှ ကိုယ့်မွေးနေ့ မှန်မမှန် နှစ်တရာ ပြက္ခဒိန်နဲ့တိုက်ကြည့်တော့မှ လား...လား... မှတ်ပုံတင်မှာ ရှိတဲ့မွေးနေ့ ၊ မွေးလ၊ မွေးသက္ကရာဇ်မှာ မွေးလ နိုဝင်ဘာဆိုတာပဲ မှန်ပြီး ကျန်တာက တလွဲတွေ။ ပြောင်းလို့ မရတော့ဘူးတဲ့။ ရှိစေတော့ ရှိစေတော့။ အငယ်ကောင် မောင်မောင်ကတော့ တမျိူး။ ဟိုင်းကြီးကျောင်း၊ စံပြကျောင်း၊ ရန်ကုန်ကျောင်း အကူးအပြောင်းမှာ မွေးသက္ကရာဇ်ကတော့ မှန်ပြီး မွေးနေ့ နဲ့မွေးလ မှားနေတယ်တဲ့။ သူကျတော့ လပိုငယ်သွားတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းက ဟိုင်းကြီးမှာတော့ မွေးနေ့ တွေ ဘာတွေလည်း မလုပ်ပါဘူး။ မွေးနေ့ ဆိုတာတောင် သတိရတာ မဟုတ်။ ဖေ၊ မေကလည်း စီးပွားရေးကို ဖိရှာနေရတာ။ အတော်ခေတ်မှီတဲ့သူလောက်ပဲ လုပ်တာ။ ရန်ကုန်ရောက်လာတော့ ရန်ကုန်လို ကျင့်ပါပြီ။ မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဘဲကင်၊ ကြေးအိုးဆီချက် စားပြီး ဘုရားတက်ပါတယ်။ စင်ကြားပူရောက်တော့လည်း မွေးနေ့ ဆို Eunos က ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သင်္ကန်းကပ်၊ ဆွမ်းကပ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ Newton က Seafood Hawer မှာ ဝါးတီးတတ်ပါတယ်။
မနေ့ ကတော့ Yanzi ကို မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ကျွှေးမယ်ဆိုပြီး ဆူရှီဆိုင်သွားတာ ပိတ်တယ်။ တပတ်တခါ သွားစားနေကြ Family Buffet ၊ Ching Dow Buffet လည်း ပိတ်တယ်။ HyBee မှာ ဘူဖေး သွားစားမယ်ဆိုတော့လည်း ပိတ်တယ်တဲ့။ ကြက်ကြော်ရောင်းတဲ့နေရာမှာလည်း Qတန်းကရှည်။ မကြာခင် ပိတ်တော့မှာတဲ့။ ဘူဖေးမဟုတ်ရင် ကြက်ကြော် ၃ခုကိုတောင် ၇ ကျပ်ပေးရတာ။ ဂရမ်းဘူဖေးဆိုရင် ၁၂ ကျပ် ကြိုက်သလောက်စား။ PizzaHut ၊ Burger King၊ Pizza Ranch၊ Subway တို့ ကို သွားချောင်းတော့လည်း ပိတ်တယ်။ McDonald တော့ မပိတ်လောက်ပါဘူးဆိုပြီး သွားတော့ ဘိုမတယောက်က သွားချောင်းပြီး လက်ကို ခရော့စ် ပိတ်တယ်ဆိုတဲ့ သင်္ကေတလုပ်ပြတော့ ကားပေါ်ကတောင် မဆင်းလိုက်ရဘူး။ တမြို့လုံးက ဆိုင်တွေ ပိတ်တာ။
မဖြစ်ချေဘူးဆိုပြီး Argio ထမင်းစားဆောင်ကို ပြေးရတယ်။ ဒါတောင် စိတ်က ထင့်နေသေးတယ်။ Argio သာ ပိတ်ရင် ငတ်ပြီ။ တော်သေးတယ် တမြို့လုံးမှာ မပိတ်တာဆိုလို့ထမင်းစားဆောင်ပဲ ရှိတယ်။ Yanzi က သူတို့တရုတ်ပြည်မှာဆို ဟောလီးဒေးဆို တမြို့လုံးဆိုင်တွေ ဖွင့်ပြီး ဈေးဝယ်ထွက်၊ အပြင်ထွက်စားနဲ့ကြိတ်ကြိတ်တိုး စည်ကားတာတဲ့။ မြန်မာပြည်နဲ့စလုံးမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ အာရှနဲ့မတူ အမေရိကန်တွေရဲ့ဟောလီးဒေးကတော့ ကိုယ်ချက်မှ ကိုယ်စားရတဲ့ဘဝ။ မချက်ရင် ငတ်ပြီ။
အမေရိကန်လေသံနဲ့ပြောရရင် What is the f****** holdiay ! S*** ! S***! Crap ! ။ စတိတ်ကို ရောက်တာ ၅ လလောက်ပဲ ရှိသေးတဲ့ကျောင်းသားတွေ အရင်ဆုံးတတ်တဲ့ စကားလုံးက f***။ ကျောင်းသားအချင်းချင်း f*** u ဆိုတဲ့ စကားလုံး မပါမဖြစ်။ မိန်းကလေးမို့f*** u အစား You are sucked လို့Chantrea က ပြောရင် စန်းထွန်းကလည်း You are sucked လို့ပြန်ပြောတာပါ။ အင်တာနေရှင်နယ် ကျောင်းသာတွေ အတွက်ကတော့ အချင်းချင်း နှုတ်ဆက်နောင်ပြောင်ကျီဆယ်တဲ့ စကားလုံးပေမဲ့You are sucked ဆိုတဲ့ စကားလုံးက အမေရိကန်တွေအတွက်ကတော့ တကယ့်ကို ခေါင်းကို ထုသလိုဖြစ်စေတဲ့ စကားလုံးပါ။ မိုင်းဆို တခါတလေ ဆူနမ်ကို လက်ခလယ်ထောင်ပြတတ်ပါတယ်။ ဆူနမ်ပြောလို့ရာမားနဲ့စန်းထွန်း ကြည့်လိုက်ရင် သူဘာမှ မလုပ်သလို၊ လက်မ၊လက်ညိူး၊ လက်ခလယ်၊ လက်သူကြွယ်၊ လက်သန်းတွေကို တခုပြီး တခုထောင်ပြီး လက်ညောင်းလို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေသယောင် ဆောင်တတ်ပါတယ်။ အမေရိကန်တွေထက်ကို အမေရိကန်ပိုဆန်ကြတာပါ။
ကားတံခါးပိတ်ရင်း လက်မပါ ပိတ်မိလို့လက်မမည်းသွားပါတယ်။ WallMart ပြေး ပလာစတာ၊ ဆေးဝယ်ကပ်ပေမဲ့ သွေးက ထွက်နေဆဲ။ ရာသီဥတုကလည်း အေးလို့တဆစ်ဆစ် ကိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့ မနက်ထိ သွေးထွက်နေတုန်းမို့ကျောင်းဆေးခန်းကို ပြေးရပါတယ်။ သူနာပြုက မနေ့ က ကျေးဇူးတော်နေ့ မှာ ဟင်းချက်ရင်း ထိခိုက်မိတာလားဆိုလို့ပြုံးမိသေးတယ်။ ပလာစတာရယ်၊ ရေခဲအိတ်ပေးပြီး ဂရုတစိုက် ကုပေးပါတယ်။ နွေဦးတုန်းက အလာဂျီဖြစ်တုန်းကလည်း သူပဲ ဆေးရုံကို လိုက်ပို့ ပေးတာပါ။ တာဝန်အရတင် မဟုတ်ဘဲ တကယ့်ကို စေတနာနဲ့လုပ်ပေးမှန်း ခံစားရပါတယ်။
ဖေ့ဘွတ်မှာ မွေးနေ့ ဆုတောင်းတွေကို မလိုက်တဲ့ စန်းထွန်းကို ဆူနမ်က လိုက်သင့်တယ်လို့ဆူပါတယ်။ လိုက်ရမှာ အရှည်ကြီးဟ ပျင်းတယ်။ မွေးနေ့ ဆုတောင်းတွေကို လိုက်ရမယ်လို့မည်သူပြောလဲ ပြန်ပက်တော့ မလိုက်ရင် တမျိုးကြီး။ လိုက်လိုက်တဲ့။ စိတ်မပါ လက်မပါ မလိုက်ချင်ဘဲ လိုက်ထားပါသည်။
ရတဲ့မွေးနေ့ လက်ဆောင်တွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တင်ကာ ကြွား ..အဲလေ ပေးတဲ့ သူတွေ ဝမ်းသာအောင်။ ဒီနှစ်တော့ ကြွားစရာ မွေးနေ့ လက်ဆောင်ဆိုလို့Yanzi ပေးတဲ့ ကိတ်သေးသေးလေးပဲ ရှိတယ်။ ကြွားမှာပဲ ကြွားမှပဲ ငါ့ကိုတော့ မတားနဲ့ ။ ဖေ့ဘွတ်က မွေးနေ့ ဆုတောင်းတွေကို အမှတ်တရဖြစ်အောင် စုစည်းပြီး ကြွားလိုက်ပါတယ်။ (မလိုက်ချင်ဘဲ လိုက်ထားရတယ်ဆိုသေး.. မလိုက်ချင်ဘဲ လိုက်ထားသည်မို့ သာ တော်၏..လိုက်များလိုက်လျှင် မလွယ်ရေးချ မလွယ်)။ ဘလော့ကနေ မွေးနေ့ ဆုတောင်းပေးတာတွေကတော့ ကျေးဇူးတော်နေ့ ပို့ စ်မှာပါ။
Zar Che Kyaw- Happy Birthday Sis..........May today be filled with smiles, laughter,love and happiness.
Khin Thant Zin - Happy Birthday ...San Htun yay. May all you dreams come true and wish u all the best :))
BoBo Lwin - Happy Birthday!
Salwida Ph Damit- Happy B'day :)
Hnin Pwint Phyu Khine - Happy Birthday, Fri..!
Tint Win - happy birthday phwar san yae :D...
Swe Naing - Happy Birthday sis...
Theingi Ba - Happy Birthday San Htun Gyi, may happiness and your sweet smiles be with you always.
Celine Ong - Happy Birthday, San San!
Khin Khin Lin - Happy birth day sis ... wishing youahappy and cheerful life ahead :)
Khin San - Happy Birthday to my lovely sister, my everything...
Wishing ur dreams come true!
Sundy Thawdarr Shwe - Happy Birthday!! :D
Zin Mar- Happy Birthday My Friend!!!
Nyein Thwet Thwet Aung - Happy Birthday friend, wish u all the best!
War War Mon - Happy Birthday sis!
Aye Thet - Happy Birthday sis....:)
Hnin Pwint Phyu Khine - Happy Birthday.. Friend..!!
Yamin Myint - Happy Happy Birthday!!! Enjoy your special day! Hopefully no more culture shock for you :)
Ei Ei Mon - Happy birthday Friend
Khine Htwe - Happy Birthday Sister :)
Aye Myat Thu - Happy Birthday sister! ;)
Khin Lay Phyu - Happy Birthday San Htun All the best!! :)
Swe Yee Mon Soe - Happy birthday, fri!!! :)
Subas Shrestha - happy bday San Htun.
Win Win Thant - Happy Birthday....
Thwe Zin - Happy Birthday, Fri. Wish you all the best.
Nilar Thein - Happy Birthday :)
Ayenb Ae'ae'- Happy birthdayama.many happy returns of the day..:)
Naam Honi - Happy B'day san san..........................waiting for treat........pizza ranch or pizza hut u decide ok.....................
Rama Khanal - Happy Birthday San San......tell me ur account i will transfer $1 asagift before Mai Pham....bcoz i know she is going to do the same thing......hehehehehe.........................
Autumn Nectar - Happy Birthday!!!
Ganga Bohara- Happy Birthday San San!!
Pyone Myat Maw - Happy Birthday....sis May all your dreams come true...
Aung Kyaw Khaing - Happy Birthday Frd! :))
Ijaz Ahmad - happy birthday San... wish u all the best.
Saw Sandar - Sis, happy birthday..:)
Dwarson Wu - Happy Birthday,friend
Yanzi Luo -Happy birthday San~~!! Any celebration for today? XDDD
Lal Babu Sah -Happy B'day San! Enjoy!!!
Iddy Magohe - happy birthday
Aung Zayar Min - Happy Birthday Fri!!!!
July Lamin Lay - Happy Birthday, sis!!!
Phyu Phyu Aung - Happy Birthday! Haveawonderful day.
Maher Hujairi - Happy Birthday =)
Srinivasan Jayaraman - Happy bday San..Haveagr8 day and year ahead!
Thet Thet Zin - Happy Birthday!!
Abhishek Hada - Happy Bday San San...enjoy ur day..
Thin Zar Phyo - happy birthday, sis
Pont Pont Htoo - Happy Birthday !
Wah Mk - Happy Birthday! SH....Wish u all the best. ^_^
Suzzette Agustin Pilapil - Happy Birthday Sun..
Myatthu Maung - Happy Birthday
Hnin Nu Yin - Happy Birthday ~~~~~~ Dont eat alone..... Pls share with your sister...:)
Nyan Lin Myint - Happy birthday sister :) Haveablast !!
Hoa Le - San San, Happy birthday! Wish you are all the best
Khin Yeik Mon - Happy Birthday, friend. Be the happiest !!
Sai Aung Min - Happy Birthday Ko Gyi yay!
Jabarul Hassan - Happy Birthday SanSan!!
Lin Aung Thet - Happy birthday! :)
Yee Mon - Happy Birthday ... San Htun !!! Be always happy ... :)
San Lwin - Happy Birthday, San Htun!!!
Yedi Yirga - Happy brthday!!
Myat Thida Soe - Happy Birthday,frd.All the best to you!!
Khine Phyu Phyu Than - Happy Birthday ama! All the best !!!
Ei Wai - Happy Birthday,sis!!!
Zar Chi Thinn - Happy Birthday to u ♥♥♥
Godwin Anasigre - Happy bday San
魏伟 - Happy Birthday! Happy Thanksgiving holiday!
Asmita Sapkota - Happy birthday ..manche ;)
Firas Rasmy - Happy Birthday San :)
Parlayyar ပါလေ ရာ - Happy Birthday Sis...
Sara Lynn - Happy Birthday Ma :)
Diamond Flower - Happy Birthday, San.
Dipesh Man Joshi - HI San happy Birthday and wish you all the best. Also Happy Thanksgiving day
Kashif Kashi - Happy Birthday! wish you many many returns of the day
Yingjun Cui - happy birthday!
Yi Mon Thant - Hi fri... Happy birthday..
Zin Mar - happy birthday sis
တုံးဖလားရွှာက သူကြီးမင်း ကိုကိုမောင် ဆိုရင် သူ့ မွေးနေ့ မှာ ဆုတောင်းပေးတဲ့သူတွေကို ပြိုင်ပွဲလုပ်ပြီး ဆုပေးလိုက်သေးတယ်။ သူကြီးမင်းကို အားကျလို့ဆုပေးလိုက်ဦးမယ်။ ဖေ့ဘွတ်မှာ ဆုရတာက မွေးနေ့ တောင် မရောက်သေးဘဲ ဝီရိယကောင်းစွာ ပထမဆုံးမွေးနေ့ ဆုတောင်းပေးတဲ့ ကျော်ကြီးလို့ခေါ်ကြတဲ့ ဇာခြည်ကျော်။ ဘလော့မှာ ပထမဆုံး ဆုလာတောင်းပေးတာက ဂျင်ဆန်းမီနဲ့အဝေးကကြည့်ရင် တော်တော်တူ (မမြင်ရလေ ပိုတူ)တဲ့ ဘလော့ဂ်မှာအိပ် ဘလော့ဂ်မှာစားလို့ထင်ရလောက်အောင် ဘလော့ဂ်ဂင်းနိုင်သူ သမီးစံ။ ရွှီ.. ဖြောင်း..ဖြောင်း..ဖြောင်း။ အောက်က မွေးနေ့ ကိတ် ၂ခုကို တယောက်တခု ဆုအဖြစ် ချီးမြှင့်လိုက်သည်။
ဖေ့ဘွတ်ကနေ မွေးနေ့ ကိတ်ပို့ ပေးတဲ့ Hnin Nu Yin၊ Happy Birthday par my friend ဆိုပြီး မအားတဲ့ ကြား၊ အုတ်လမ်းကို ကုက်တတ်ရတဲ့မြန်မာပြည်ကနေ ဆုတောင်းပေးတဲ့ အိကေ၊ အီးမေးလ်နဲ့တကူးတက ဘတ်ဒေးကဒ်ပို့ လာတဲ့လင်းလင်းဟန်၊ let's go to newton to eat seafood
et meet at newton mrt ဆိုပြီး ဘတ်ဒေး wish တဲ့ အိအိ၊ Happy 35 years birthday ဆိုပြီး ဆုတောင်းပေးတဲ့ ကောင်းကောင်း။ (သူများကို သက်သက်မဲ့...)
အီးမေးလ်နဲ့တကူးတကွ ပို့ ပေးလာတဲ့လင်းလင်းဟန်ဆီက မွေးနေ့ ကိတ်
ဖေ့ဘွတ်ကနေ Hnin Nu Yin ပေးတဲ့ မွေးနေ့ ကိတ် တယောက်တည်း မစားနဲ့မကြီးနဲ့ရှယ်စားတဲ့။ စန်းထွန်း အစားပုတ်တာ သိပုံရတယ် ...:P
Happy Birthday! Although this special day may find you many miles from your family and home, your ComPro family wishes for you deep personal happiness and abundant professional success. We are fortunate to have you with us, and appreciate you today -- and every day.
Best wishes of celebration,
All the ComPro faculty and staff
ဒီနေ့Black Friday ပါ။ ဈေးတွေ ထက်ဝက်ချလို့မလိုတာရော၊ လိုတာရော ဝယ်လို့နောင်တရနေသူမိတွေ၊ အွန်လိုင်းကနေ ကြည့်ပြီး ဟိုဟာလိုချင်၊ ဒီဟာလိုချင်ပေမဲ့ဘတ်ဂျက်အခြေအနေကြောင့် ဘာဆိုဘာမှ မဝယ်ဘူးဆိုပြီး တင်းခံနေသူတွေ။
ပျော်ရွှင်သော Black Friday ဖြစ်ပါစေ။
P.S : ပူးပူး ရေ Newton Seafood Hawer က ဂဏ္ဏန်း၊ ငါးလိပ်ကျောက်စားပြီး ကိတ်မုန့် လေးကို အချိုတည်းလိုက်ပါနော်...:P
နိုဝင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၁။
မှာ ကလေးအသက်က ကိုးလို့ကန့်လန့်ဖြစ်နေရင် အဲ့လို
ပဲ သက္ကရာဇ်ဖြိုကြတာပါပဲ...၊အလိုလိုနေရင်း အသက်တစ်
မြို့ပတ်ရလို့ ပျော်စရာတစ်ဝက်လောက် လျော့သွားတယ်ထင်တယ်..
ဘဝတစ်လျှောက်လုံး စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ..
ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒအားလုံးပြီးပြည့်စုံပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်.နော်
မနေ့ က ဦးဆုံး လက်မလေးအမြန်သက်သာပါစေလို့ ရေးခဲ့တာ။
ပထမတခေါက်တုန်းက အီးမေးလ်ထဲမှာ တွေ့ ပြီး ဘလော့မှာ မတွေ့ ဘူး..ခုတခေါက်တော့ ဘာမှ မတွေ့ တာ..ကွန်းမန့်setting တခုခု ဖြစ်နေတယ် ထင်တယ်..နောက်တခါ ပြန်လာမန့် ပြီး ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးဗျား..